I-Planeta Award 2018: Sityhila iyelenqe lomsebenzi wokugqibela. | Uncwadi lwangoku
UAna Lena Rivera Muñiz | | Ukhuphiswano kunye neeMbasa
Ingqungquthela yeendaba yeBhaso leSicwangciso se-2018: Ezi ziinoveli ezili-10 phakathi kwazo ziphumeleleyo kunye nokugqibela.
Namhlanje, umongameli weqela le-Planeta kunye nejaji ye Imbasa yePlanethi 2018 batyhile iyelenqe le Iinoveli ezili-10 zokugqibela kwinkomfa yoonondaba ebibanjelwe ePalacio de San Pau, apho bekukho i-Actualidad Literatura.
Kulo nyaka u-2018, umxholo weenoveli zokugqibela uthathe indawo ebalulekileyo emva kwamahlelo angama-65 oMvuzo wePlaneta. INoveli yezeMbali kunye neMfazwe yamakhaya inika kulo nyaka iinoveli ezinabantu ababhinqileyo. Kokugqibela kwabo balishumi bokugqibela sifumana iinoveli zabacuphi bazo zonke iintlobo (ezihlekisayo, ezinesayensi, ezengqondo nezembali) kunye neentsomi zesayensi kunangaphambili. Zikho ke iinoveli zokugqibela:
1 Sala kakuhle, nguSandra Glaser (isibizo)
2 Ubundlobongela besini sikaPaulina Ayerza (isibizo)
3 Ukujonga isibhakabhaka esithuleyo, ngu-Elena Francis (isiteketiso)
4 Ukunyuka, nguJames Sussex (isibizo)
5 Ubugcisa bokubaleka, nguDaniel Tordera.
6 I-Cherry Tree Shadow, ngu-Ariane Onna (isibizo)
7 Abalahlekileyo, nguMaría Díez García
8 Umlingane kaHatshepsut (isiteketiso)
9 UAngela nguLeticia Conti Falcone
10 Umthandi Womhlolokazi Omnyama, nguRay Collins (isiteketiso)
Sala kakuhle, nguSandra Glaser (isibizo)
Isaga yosapho ekhawulezayo. Ibali lomzabalazo, ukoyisa kunye nokusinda kwizizukulwana ezithathu zabafazi abaphuma kusapho olunye, abaqhutywa bubudenge yindoda engenanceba, nalapho umbalisi azama ukuqonda elidlulileyo lakhe ukuze adibanise nezinto ezikhoyo ngoku.
Ubundlobongela besini sikaPaulina Ayerza (isibizo)
Inoveli ekreqayo, enamabali athandana namanye kunye nesiphelo esothusayo Emva kokufunda ngokusweleka kowasetyhini owayekade eluthando olukhulu kuye, umzobi waseArgentina owayehlala eParis ubalisa ngeenzima awayekuzo kunye nobudlelwane obunzima bolawulo kunye nokwaliwa ekuhlaleni okwasekwa phakathi kwaba babini.
Ukujonga isibhakabhaka esithuleyo, ngu-Elena Francis (isiteketiso)
Inzululwazi ye-Sci-fi. Ukukhanya okungummangaliso, apho izazinzulu zingafumani nkcazo, kuvela esibhakabhakeni. Nangona kunjalo, iziphumo ziya kubonakala kungekudala: abantu abahlukeneyo kwihlabathi liphela baqala ukwabelana ngememori, baphathwe kakubi kwaye banxibelelane nobomi.
Ukunyuka, nguJames Sussex (isibizo)
Ukunyuka okumangalisayo komfazi kwihlabathi lamadoda egxile kumzabalazo wamandla ezopolitiko kwaye abacinga ukuba ubunkokeli bobabo kuphela. I-protagonist iya kusebenza ngobuchule ukufezekisa iinjongo zayo.
Ubugcisa bokubaleka, nguDaniel Tordera.
I-Sci-fi dystopia apho abantu abane abadala ababaziyo bavuka kwigumbi elivaliweyo elinebhokisi enye kuphela. Ngaphakathi, umpu, iimbumbulu ezintathu kunye nenowuthi eyazisa ukuba inye kuphela yazo eya kusinda, kufuneka bavume, bathathe isigqibo sokuba ngoobani abaza kuphila bazibulale ngokulandelayo.
I-Cherry Tree Shadow, ngu-Ariane Onna (isibizo)
Kwidolophu yelizwe laseFrance iBasque, kwenzeka into eyoyikisayo wonke umntu: Yintoni enokuthi ikhokele umfazi obonakala onwabile ukuba aphelise ubomi bakhe kunye nentombi yakhe engaphezulu nje konyaka? Le yimfihlakalo umbalisi aya kuzama ukuyityhila, engena ekuxineni kunye nesithukuthezi esiquka ukuba ngumama.
Abalahlekileyo, nguMaría Díez García
Ibali labalinganiswa ababini abachasayo abanqumlayo kunye nabadibanisayo ngaphandle kwabo bengazi. Yena, indoda eyabethwayo ngumsebenzi kwaye ngubani, ngaphandle komsebenzi wakhe oyingqayizivele, okhokelela kubomi obuqhelekileyo; yena, umcuphi wabucala ojolise ekungathembekini nasekuphandeni ityala lokubulala.
I-Modernist Palace yase San Pau: Inqanaba lembeko kwinkcazo yemisebenzi yokugqibela yomvuzo we-2018 Planeta.
Umlingane kaHatshepsut (isiteketiso)
Inoveli yomcuphi. IValencia, S. XVI: Umfazi ufumana ikhowudi yokuqala ye-chess yanamhlanje. ENew York, inkulungwane yama-XNUMX: ugqirha ubandakanyeka ekukhangeleni le codex. Uphando luya kumsa eValencia, apho aya kufumanisa khona ubumnyama bakhe bangaphambili kunye nexesha lakhe elimnyama.
UAngela nguLeticia Conti Falcone
Umbhali owaziwayo uphuma kuhlobo oluqhelekileyo kunye nenoveli yolwaphulo-mthetho kaRaymond Chandler. Ukufa komntu osemncinci wase-Uruguay, ozinikezele ekulungiseni izicatshulwa kunye nokubhala amabali amnyama, kwenza ukuba umkhomishina uPiedrahita abuyele kwisenzo, efumanisa ukuba lo mfazi wayenetyhefu. Kodwa ngubani owayenesizathu sokumbulala?
Umthandi Womhlolokazi Omnyama, nguRay Collins (isiteketiso)
Inoveli emnyama ngoncumo. Umntu ohamba ngezinja waseArgentina uyabandakanyeka kwimeko yoMhlolokazi Omnyama, umphindezeli obulala abahenyukazi. Uyabarhanela abantu basetyhini abaliqela nangona egqibela ngokufumanisa ukuba ayisiyonto ingaphezulu kwesigqubuthelo samashishini amdaka awayedityaniswa nomntakwabo ongasekhoyo.
Yeyiphi le misebenzi eya kuba yimpumelelo kunye neyokugqibela kwiBhaso lePlanethi ka-2018? Ukubheja kuvunyelwe. Ngomso we-15 ka-Okthobha u-2018, usuku lwe-Saint Teresa, njengayo yonke i-Okthobha iminyaka eyi-65, ehlonipha uTeresa, umfazi womsunguli, le mfihlakalo iya kutyhilwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ukhuphiswano kunye neeMbasa » I-Planeta Award 2018: Sityhila iyelenqe lomsebenzi wokugqibela.